Rekoodhka Xun Ee Aanu Paul Pogba Doonayn In Uu Arko, Diego Costa Iyo Alexis Sanchez Oo Pogba Ku Ku Soo Xiga |
Rekoodhka Xun Ee Aanu Paul Pogba Doonayn In Uu Arko, Diego Costa Iyo Alexis Sanchez Oo Pogba Ku Ku Soo Xiga
Xidiga xulka qaranka France iyo kooxda Manchester United ee Paul Pogba ayaa xagaagii dhawaan lacag rekoodh aduun ah dib ugu soo laabtay kooxdii uu ka baxay isaga oo da’yar ah ee Red Devils, wuxuuna xili ciyaareedkan ku bilawday qaab ciyaareed su’aalo badan lagu galiyay in xidiga ree France uu u qalmay lacagtii 100 milyan ahayd ee ay kooxda Mourinho ka soo bixisay.
Laakiin Pogba ayaa si gaabis ah dib ugu helayay qaab ciyaareedkiisii fiicnaa ee uu ku soo bandhigay Juventus inkasta oo uu ilaa hadda ku jiro horumarka uu ku doonayo in uu ku gaadho heerkiisii ugu fiicnaa ee Old Lady kaga soo caawiyay in ay koobab badan ku soo guulaysato. Laakiin xogta laga ururiyay ciyaartoyda Premier Leaque-ga ayuu Pogba noqday xidiga ugu liita ee tirada ugu badan kubbad taabashada ugu xun sameeyay.
Pogba ayaa 50 jeer booskiisa lumiyay kadib markii uu sameeyay taabasho xun oo kubbada ah waxaana ku soo xidiga labada gool dhaliye ee xili ciyaareedkan goolasha ugu badan ilaa hadda dhaliyay ee Diego Costa oo 48 jeer taabasho kubbada ah oo guuldaraystay laga diwaan galiyay iyo Alexis Sanchez oo isna 43 jeer laga diwaan galiyay.
Paul Pogba ayaa ilaa hadda ah ciyaartoyga labaad ee daqiiqadaha ugu badan ka ciyaaray horyaalka Premier leaque-ga xili ciyaareedkan waxaana ka horeeya oo kaliya David De Gea oo ay isku koox yihiin. Pogba ayaa sidoo kale kooxdiisa ugu soo muuqday lixdii kulan ee ay Europa Leaque-ga ka soo ciyaareen.
Dhinaca kale xidiga kooxda Crystal Palace ee Wilfried Zaha ayaa ah xidiga xili ciyaareedkan tirada ugu badan booskiisa lumiyay isaga oo 55 jeer la bara bixiyay 15kii kulan ee Premier Leaque-ga inkasta oo uu haddana yahay ciyaartoyga kaliya ee tirada ugu badan ee gambiska ah isku dayay wuxuuna isku dayay 115 jeer.